गिरिजाप्रसादले माओवादीलाई फौजी कारबाही बढाउनु पर्यो भन्नुभएकै हो : डा. भट्टराई
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार १८:२२:००
समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जुनयुद्ध दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति आंशिक सत्य भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार संसद भवन बाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघमा घोषणा गरेको नगरपालिका निर्वाचन बिथोल्न स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई आग्रह गरेको बताएका हुन् । १२ बुँदे समझदारीमा नै कांग्रेस लगायतका सात दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र तत्कालिन माओवादी फौजी ढंगले अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए ।
उनले भने ‘उहाँ (प्रचण्ड) को बानी नै सानो कुरालाई पनि बढाई चढाई गरी प्रस्तुत गर्ने बानी छ । उत्तेजना फैलाउने स्वभाव छ । १२ बुँदे समझदारीको ड्राफ्ट गर्ने म नै हुँ । मलाई याद छ । उहाँहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले र हामीले फौजी ढंगले प्रहार गर्ने सहमति भएको थियो । पुसको अन्तिमतिर आन्दोलन राम्रोसँग हुन सकेन । हामीले युद्धविराम भंग गरेर जाने निर्णय गर्दा उहाँ(गिरिजा) ले ठोक्नुपर्याे भनेर चाहीँ भन्नुभएको हो । लौ न कारवाही अगाडी बढाउनुपर्याे उहाँले भनेको हो म पनि साँक्षी थिए । नगरपालिका निर्वाचन विथोल्न फौजी कारवाही बढाउनुपर्याे भन्नुभएको हो ।’
नेकपा अध्यक्ष दाहालले विहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको कार्यक्रममा जनयुद्धका बेला तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग फोनमा कुराकानी भएको र त्यसबेला कोइरालाले फौजी कारवाही बढाउन आग्रह गरेको बताएका थिए ।
दाहालको अभिब्यक्ति प्रति नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध जनाई सकेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तीमार्फत अतिरञ्जित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
#गिरिजाप्रसाद # बाबुराम भट्टराई
संसद्मा डा. बाबुराम भट्टराईको चुनौती : मलगायत सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ
सरकार बाहिरका दलकाे टिप्पणी : गठनकाे दुई वर्षमै सरकार पूर्ण असफल
सरकारबाहिरका दलकाे टिप्पणी : गठनकाे दुई वर्षमै सरकार पूर्ण असफल
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण पेस गर्न अख्तियारलाई सर्वोच्चको आदेश
स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रचण्डले विवादमा ल्याएकाे भन्दै कांग्रेको आपत्ति